ကိုကျော်ကျော်ထွေး(ခ) ကိုမာကီနဲ့ မစုစုနွေး(ခ) မနွယ်နွယ်ဝင်းတို့ရဲ့ မင်္ဂလာ ဧည့်ခံပွဲ အခမ်းအနား.... ~ ဒီမိုဝေယံ
ကိုကျော်ကျော်ထွေး(ခ) ကိုမာကီနဲ့ မစုစုနွေး(ခ) မနွယ်နွယ်ဝင်းတို့ရဲ့ မင်္ဂလာ ဧည့်ခံပွဲ အခမ်းအနား....
ကိုကျော်ကျော်ထွေး(ခ) ကိုမာကီ နှင့် မစုစုနွေး(ခ) မနွယ်နွယ်ဝင်းတို့ရဲ့ မင်္ဂလာ ဧည့်ခံပွဲ အခမ်းအနားအား ယနေ့ ၃-၆-၁၂ ညနေ့ ၅း၀၀မှ ၇း၀၀အထိ ရန်ကုန်၊ ဗဟန်းမြို့နယ် တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်..။
နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ် အသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ တတ်ရောက်ကြပါတယ်..။ အဖွဲ့ချုပ်နာယက ဘဘတင်ဦးနဲ့ ဘဘ၀င်းတင်တို့ တက်ရောက်ကြပြီး ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့ဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်ကြပါသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က လူငယ်များ၊ NLD(BG) အဖွဲ့ဝင်များ၊ မဇ္ဈိမလှိုင်း ကိုရဲလွင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ လူမှုရေးနယ်ပယ်က မဖြူဖြူသင်းတို့ အမေသီတာဝင်းအောင်တို့နှင့် အဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော်အမတ်များလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်..။ မင်္ဂလာခန်းမ ပြည့်လျှံသည့်အထိ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ပယ်မှ မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
သတင်း၊ ဓာတ်ပုံ ညီငယ် လင်းဆက်
ကိုယ်ကျိုးမဖက် တိုင်းပြည်အတွက် ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ ကိုကျော်ကျော်ထွေး(ခ)ကိုမာကီနဲ့ မစုစုနွေး(ခ)မနွယ်နွယ်ဝင်းတို့ မင်္ဂလာနှစ်တရာတိုင်ပြီး တိုင်းပြည်အကျိုး ဆက်လက် သယ်ပိုး ထမ်းရွက်နိုင်ပါစေ..
မက္ကဆီကိုနယ်စပ်မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းလူအုပ်ကြီး
ဥရောပ (၅)နိုင်ငံခရီးစဉ်မှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ လူထ...
တောင်ကြီးမြို့ ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်...
ဆင်ဖြူမျက်နှာ ဆင်မည်းမကြည့်ဝံ့ရှာ (ကဗျာရှင် နေရဲန...
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဇကာတင် ရွေးချယ်ခံရသူများအား ဂုဏ်ပြ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြင်သစ်ခရီးစဉ် ...
ရေဦးမြို့နယ် ကော်မရှင်ရုံးမှ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ...
၂၀၀၄ခုနှစ်က ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့...
ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ အစိုးရဧည့်သည်တော် အဖြစ်ရောက်ရှိလ...
ယနေ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံအစိုးရ ဧည့်သည်တော်အဖြစ် ပြင်သစ်...
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ ၂၅ရက်နေ့ နောက်ဆုံးရ သတင်...
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းရှိ ခြံအမှတ် (၅၄)နေအိမ် အမွေ ပိ...
မူစယ်မြို့ တောင်ရပ်ကွက်ရှိ အကျင့်ပျက် ခြစားနေသည့် ...
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဂွမြို့နယ်ဂွကျွန်းသို့ ဘ...
စာပေစီစစ်ရေးက ဖော်ပြခွင့်မပြုတဲ့ "အနောက်ဖက် ပင်လယ်...
ဘင်္ဂလီစစ်တမ်း (အပိုင်း ၁) ရေးသားသူ (ဝံသာနု ရက္ခိတ..)...
၂၂ရက်နေ့က လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ြ...
ယနေ့ လန်ဒန်မြို့ သိမ်းမြစ်ကမ်းဘေးက Royal Festival ...
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် နောက်ပိုင်း ခမ်းနားကြီးကျယ်လှတဲ့ ဗြိတ...
ယနေ့ မြန်မာပြည်သူလူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၆၇)နှစ်ပြည့်မေ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အောက်စဖို့ဒ်...
မြန်မာပြည်သူ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၁...
GENDER & SOCIETY ကျား-မ ဖြစ်ခြင်း အခန်းကဏ္ဍနှင့် လူမ...
လူထုထဲက . . . သံမဏိကလောင်တစ်ချောင်းကြွေလွင့်..
ထူးထူးခြားခြား ယနေ့မွေးရက်နဲ့ မွေးနေ့ အဂါင်္နေ့ တိုက...
ဒီကနေ့ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ Dublin မြို့ရဲ့ လွတ်လပ်ရေ...
Amnesty International ရဲ့ 2009ခုနှစ်က ချီးမြှင့်တဲ...
ဒီကနေ့ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ Dublin မြို့သို့ ရောက်ရှိ...
ယနေ့ Oslo peace forum မှာတွေ့ဆုံကြတဲ့ လူထုခေါင်းဆေ...
သတင်းစာဆရာကြီး လူထုစိန်ဝင်း ကွယ်လွန်
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ရခိုင်ပြည်နယ် ကယ်ဆယ်ရေး...
၁၆ရက်နေ့က မြန်မာပြည်သူလူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်...
ဥရောပရောက် မြန်မာတွေနဲ့ နော်ဝေနိုင်ငံသား ထောင်ချီတ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ယနေ့ နိုဘယ်ြ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ယနေ့ နော်ဝေန...
၁၅ရက်နေ့ မနက်ပိုင်း စစ်တွေမြို့ သတင်း..
ILO က ဆွေးနွေးပွဲမှာ .. ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာနိုင...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဆွစ်ဇာလန်နို...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကမ္ဘာ့ အလုပ်သမား...
ပါလီမာန်ဒီမိုကရေစီခေတ် ရခိုင်ပြည်နိုင်ငံရေးနှင့် လ...
ရခိုင်ပြည်နယ် ပြည်နယ်ရုံးဆိုက်ရာ စစ်တွေမြို့ မြင်က...
၁၂ရက်နေ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ပြည်နယ်ရုံးဆိုက်ရာ စစ်တွေမြ...
အကြမ်းဖက်ဆူပူသူများကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပြ...
နိုင်ငံခြားသတင်းဋ္ဌာနများနဲ့ နိုင်ငံတကာအတွက် လိုအပ်လ...
စစ်တွေမြို့ ၁၁ရက်နေ့ ည၁၁နာရီခန့် အခြေအနေနှင့် စပ်ဆ...
ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေမှာ ကျီးလန့်စာ စားနေရတဲ့ ရခိုင်ြ...
ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဇွန်လ (၁၁)ရက...
ယနေ့ည MRTVထုတ်လွှင့်သွားတဲ့မှ သမ္မတဦးသိန်းစိန် မိန်...
ယနေ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများရဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲနှင်...
၉ရက်နေ့က စစ်တွေမြို့မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပ...
ပြည်သူ့ခေတ် ဂျာနယ်မှ ၉ရက်နေ့.. မောင်းတော၊ စစ်တွေ အ...
မောင်းတောမှ ရခိုင်ပြည်သူများ အကြမ်းဖက်ခံရမှုနှင့် ပ...
မောင်တောမြို့တွင်း အစိုးရ စစ်တပ်များ ရောက်ရှိလာပြီ...
သမ္မတရုံးဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ သမ္မတတရုံး အရာရှိ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်...
စစ်တွေမြို့မှ မှန်စီသုသာန်သို့ အသုဘချပြီး ပြန်လာသေ...
မောင်တောမြို့နယ်အတွက် ညမထွက်ရ အမိန့် (ပုဒ်မ ၁၄၄)ထု...
အစိုးရတပ်များမှ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အကြမ်းဖက်သမား ဘင်္ဂလ...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ တရားဝင်ပါတီရဲ့ ဆိုင်း...
၆.၆.၂၀၁၂က ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင်နှင်းဆီမှာ ကျင်းပတဲ့...
ရမည်းသင်း မိုးထိမိုးမိ တောင်ပေါ်ရှိ ရွှေတွင်း လုပ်သာ...
မိုးထိမိုးမိ ရွှေတောကို အပိုင်စီးထားသော အမျိုးသားကြ...
နေပြည်တော် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်မှ အဖွဲ့ချုပ် အောင်နို...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မိတ္ထီလာမြို့နယ် ပြည်...
ယင်းမာပင်မြို့နယ် ညောင်ကိုင်းအနောက်ရွာနေ ကိုးတန်းေ...
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းရေးနေ့မှာ သစ်ပင် စိုက်ဖ...
ယနေ့ ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှ လ...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ကိုမြအေးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း.....
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေများနဲ့ ပတ်သက...
တာမွေမြို့နယ် အဖွဲ့ချုပ်ရုံး ဆိုင်းဘုတ်နှင့် အဖွဲ့...
လှိုင်သာယာမြို့နယ် ကျန်စစ်သား အိမ်ယာတိုက်ခန်းများ ...
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသော အခြေအနေများနဲ့...
လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်း ပန်းရဲ့လမ်း.. (သတင်း၊ ဓာတ်ပုံ)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြိတ်ခရီးစဉ်မှာ လျှပ်ပြေးယာဉ် င...
ကိုကျော်ကျော်ထွေး(ခ) ကိုမာကီနဲ့ မစုစုနွေး(ခ) မနွယ်...
"အဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့မှာ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြထုတ်ဖော် သွား...
တရုတ် စီးပွားရေး တုန့်ဆိုင်းမှု (ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး ဧည့်ဝတ်မြ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယနေ့နံနက်ပိုင်း...
ထိုင်း၊ မြန်မာနယ်စပ်က မယ်လဒုက္ခသည် စခန်းသို့ သွားရေ...
မန္တလေးမြို့ သေဆုံးခြင်း (အဆိုတော်လင်းလင်း)
ယနေ့ ထိုင်း၊ မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့သို့ လေယာဉ်ခ...
ထူးခြားတဲ့ ၂၀၁၂ World Economic Forum ပွဲနှင့် လူထု...
ယနေ့ World Economic Forum မှာ ပြောကြားခဲ့တဲ့ လူထုေ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မဟာချိုင် ဒု...
ယနေ့ World Economic Forum ညစာစားပွဲမှာ တွေ့ဆုံခဲ့တ...